Siria: Ireharehana ny mahaNandra sy mahamazandoha · Global Voices teny Malagasy
Siria: Ireharehana ny mahaNandra sy mahamazandoha
Voadika ny 28 Jolay 2008 22:35 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, English
Mpamaham-bolonana Syriana Mohammed Online [Ar] no namoaka hevitra enina mahatonga ny olona ho “nandra” sy “be didoha.” Eto ary dia asehony hoe inona no mahatonga azy hirehareha ho anisany.
Hoy i Mohammed:
Voangoko avokoa ny toetoetrany rehetra, izay raha hitanareo dia ataonareo avy hatrany fa ‘nandra ‘ sy ‘ekisitiremista.’ aho:
– Raha misy aminareo manolotsaina olona, indrindra fa amin'ny resa-pivavahana, nanao fahadisoana goavana ianao izay. Na ianao hiaro tena avyhatrany na ho vonona hanaiky ny tsikara noho iny fihetsikao iny!
– Raha misy aminareo miteny amin'ny olona tsy hijery vetaveta, hivavaka amin'i Allah hahazoana famelan-keloka, izay porofo lehibe fa na ianao milendalenda tokoa nijery ireny lahatsary ireny na ianao olona baribara miteny ny zavatra tsy ahiny akory. Tokony ho avy amin'ny olom-pivavahana ihany ny fandrarana fijerena sary vetaveta, ary avy amin'ny fatwa ( lalàm-pivavahana silamo)!
– Raha toa ianao mpampiasa ireny teny fampiasa any amin'ny fivavahana ireny, tahaka ny teny hoe fahotana, asa tsara, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatezeran'Andriamanitra, ny Shari'a (lalàna silamo), dia tena olona be didoha [sekta raha amin'ny kirisitiana], baribara, nandra, ary tsy sivilize. izany no porofo fa mbola miaina ny tamin'ny andron'ny salaka ihany ianao [rameva amin'ny teny arabo]!
– Raha toa ianao manana tsikera amin'ireny boky sy lahatsoratra manontany ny fisian'Andriamanitra ireny dia tsy manaraka ny fandrosoana ianao izay ary manohitra ny fahafahana hivoatra!
– Raha toa ianao anisan'ny mampirisika ny vehivavy hisarona Hijab (voaly silamo), dia mitady hanambany ny vehivavy ianao izay amin'ny fanerena azy ireny hanao izay zavatra tsy tiany ary mifanindran-dalana amin'izay manakana ny fandrosoan'ny fiaraha-monina!
– Raha atao bangotokana, raha toa ianao manely ny soatoavina tsara arahina amin'ny fiarahamonina, dia “nandra”, “be didoha” ary “mahery setra (baribara) ianao izay!
Fehiny, te-ho nandra aho, ilay nandra eo imason'ny sasany!